Dhacdooyinka Puntland – Page 27 – Puntland Voice
Warbixin+Sawirro: Madaxweynaha dawladda Puntland oo ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeeyey toddobaadka xorriyadda
Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta 26-Jun-2016 oo ku beegan 56-sano guuradii kasoo wareegtey markii ay gobollada woqooyi ee dalka Soomaaliya xorriyaddooda ka qaateen gumeystihii Ingiriiska. Madaxweynaha ayaa xusay maanta oo kale 56-sano ka hor in […]
SAWIRRO: Wasiirka cusub ee Wasaaradda Caafimaadka Puntland oo la dhaariyey
Wasiirka cusub ee Wasaaradda Caafimaadka Dawladda Puntland Dr.Cabdinaasir Cismaan Ciise ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 6-7-2015 lagu dhaariyey xafiiska Madaxtooyada Dawladda Puntland ee magaalada Garoowe. Garsoore Aadan Cumar Maxamed oo katirsan Maxkamadda sare ee Puntland ayaa maanta wasiirka cusub […]
Wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland Prof. Abshir Aw-yuusuf Ciise ayaa Maanta siweyn loogu soo dhoweeyey magaalada garoowe ee caasimadda dawladda puntland. Wasiirka ayaa kasoo kicitimay magaalada Minneapolis ee carriga maraykanka halkaas oo uu kunoolaa muddooyinkii ugu dambeeyey […]
Wasiirka Amniga Puntland Oo Sheegay inaan la aqbali karin Shaqaaqooyin laga abuuro Puntland Gaar ahaan Gobolka Nugaal
Shir looga hadlayo adkaynta ammaanka Gobalka Nugaal iyo ka hortaga dhibaato ay samayn karaan ciidamo gadoodsan oo ku sugan tuulada Qarxis ee Degmada Eyl ayaa maalinkii shalay lagu qabtay Caasuamdda Puntland ee Garowe. Shirkaa isaga aha waxaa yeeshey Wasiirka Amniga, […]
Golaha Wakiillada Dawladda Puntland oo Dib u eegis ku sameeyey Miisaaniyadda Dawladda ee Bilaha June ilaa December
Wasiirka cusub ee maaliyada Puntland Cabdulaahi Shiikh Axmed ayaa maanta hortagay barlamaanka Puntland oo ku guda jira kalfadhigooda 35-aad. Waxaan halkaan kuugu soo gudbineynaa war bixin kooban oo ku saabsan noqoshada Miisaaniyadda sanadkan July ilaa December 2015. Sida aad la […]
Magaalada Dhuusamareeb ayaa maanta waxaa ka furmi doona shir ladoonayo in maamul loogu dhiso gobolada dhexe ee Wadanka Soomaaliya, kaasi oo ay hormuud katahay culimaa’udiinka Ahlsuna Waljameeca ee bartamaha iyo Koonfurta Soomaaliya. Sheikh Maxamed Mursal oo kamid ah culimaa’udiinka Ahlusuna […]
Faallo: Muhiimadda Nabadda
Marka la soo hadal qaado erayga Nabad, qofkastaba waxaa islamarkiiba ku soo dhacaya qiimaha ay nabadu u leedahay Guud ahaan nolosha aadanaha, oo ay muhiim tahay in mar walba qofku ku noolaado Nabad waarta inta wakhtigiisa uga dhiman. Waxaa sidookale […]